NIDAAMKA NATIIJADA DHAQAN EE
U sameeyso khadka tooska ah ee tooska ah, hal-ka-gogosha, roogaga, foornada, dhammaadka nadiifinta deggeneyaasha iyo adeegyo badan oo guri. Lacag Qarsoon Ma Jirto. Nadiifiyaasha xaafadaha lagu aaminay. Qiimo daahfurnaan. Buugso oo Bixi Khadka Tooska ah oo fiiri xaaladda dalabkaaga. Adeegga Macaamiisha Weyn. Qiimaha Cadaaladdu.
Hadaad rabto adeegga nadiifinta guriga ee ugu wanaagsan ** Deegaankaaga ** markaa ** Magaca Shirkaddaada ** waa ** Goobta ** bixiyaha nadaafadda guriga adiga ku gaarka ah! Waxaan leenahay sumcad weyn oo aan ku siino adeegyo lagu nadiifiyo, daacad ah oo tayo leh oo tayo leh guryaha guryaha ** Aagga **.
Waa maxay us
U qor buug gurigaaga nadiif hadda. Waxa kaliya ee aan u baahanahay waa 48 saacadood oo ogeysiis ah inta kalena waan daryeeli doonnaa. Buug laga bilaabo $ xx saac.
Nadiifinta Deganaanshaha Kirada
Qor waqtigaaga kirada nadiifinta. Waxa kaliya ee aan u baahanahay waa 48 saacadood oo ogeysiin ah inta kalena noo daa.
** Magacaaga Ganacsi ** wuxuu ku bilaabay sidii qandaraasle yar oo ku yaal ** Deegaankaaga **, dib ugu noqo ** Sannadkii aad asaasay **. Hadda, oo leh sanado khibrad xirfad leh oo ka dambaysa dhabarkayaga, shirkaddeena ayaa ah shirkad hormuud u ah nadaafadda gudaha ** Deegaankaaga **. Waxaan bixinaa adeegyo dhammaystiran oo dhameystiran, annagoo adeegsanayna qalabkii ugu dambeeyay ee xirfadeed iyo hababkii ugu wax ku oolka badnaa ee loo yaqaan ilaa maanta. Kumanaan kun oo macaamiisha ah ayaa aaminay annaga bil kasta waxaanan hubinaa inaan ku noolaano wixii ay filanayeen.
Himiladeenna waa bixinta adeegyo la awoodi karo, laakiin aad waxtar u leh oo ku habboon guriga oo ku habboon sida ugu macquulsan. Taasi waa sababta aan u leenahay koox daryeelka macaamiisha oo had iyo jeer diyaar u ah inay kaa caawiyaan waxkasta oo aad u baahan tahay.
Hadafkeennu waa inuu si rasmi ah u dhammaystiro XIDHIIDHKA UGU DAMBEEYA EE WAALIDKAN, OO AY KU SAABSAN YIHIIN KU SAABSAN AQOONSASHADA MUUQAALKA iyo kartida aan u leenahay in la muujiyo wax ku ool ah oo la taaban karo.
Markaad raadineyso shirkad nadiif ah oo lagu kalsoonaan karo oo daryeela gurigaaga ama meheradaada ganacsi, ** Magaca Shirkaddaada ** wuxuu ku siinayaa isku-dheelitirka saxda ah ee qiimaha iyo tayada. Waad iska hubin kartaa in kooxahayaga nadaafadda ay yihiin kuwa akhlaaq wanaagsan, saaxiibtinimo leh oo dadaal badan, marna ha iska tuurin hawsha nadiifinta ee booqashadooda soo socota.
Qiimaha guryaha la tartamaayaa waxay bilaabanayaan $ XX saacaddiiba
Boosaska dabacsan oo ay ka mid yihiin habeen dambe, usbuuc-dhammaadka iyo fasaxyada bangiga
Nadiifiyaasheena deegaanka ayaa si buuxda u tababaran, loo xaqiijiyay iyo caymis ku jira
Waxaan u isticmaalnaa xalalka eco-u habboon iyo saabuunta guryaha lagu dalbado marka la codsado
Adeegyadeenu waxay la yimaadaan dammaanad qaali ah oo 100% ah
“** Magaca Shirkaddaada> waxay soo dejisay qaab lagu bixiyo adeegyada khubarada qaab aan lacag lahayn, iyo iyadoo xooga la saarayo tayada sidoo kale. Waxaan kula talin lahaa qof kasta oo u baahan nadiifiyeyaal lagu kalsoonaan karo oo hufan .. ” Daniel Shafer
"Waxaan u adeegsanay ** Magaca Shirkaddaaga '2dii sano ee la soo dhaafay anagoo nadiif ah laba usbuuc oo aan kula taliney saaxiibo badan iyo asxaabteena."
“** Magaca Shirkaddaada ** waa shirkad nadiifin xirfadeed oo aad u sareysa; Waxaan adeegyadooda nadiifinta ka helnay qaar badan oo ka mid ah guryahayaga kirada ah oo leh faallooyin gaar ah oo ka yimid kiraystayaasha iyo Mulkiilayaasha guryaha. Markii aan ka guuray gurigayga waxaan kiraystay ** Magaca Shirkaddaada '> kaasoo ku fuliyay nadiif aad u wanaagsan dhammaantii guriga, oo ay ku jiraan nadiifinta kaarbetyada. ”
"Waxaan kahelay ** Magaca Shirkaddaada ** inuu yahay qof daacad ah oo lagu kalsoonaan karo oo lagu kalsoonaan karo, laakiin waxkasta ka sokow in la bixiyo adeeg aad u wanaagsan.
Waqti noocee ah ayaa loo heli karaa dhamaadka nadiifinta deganaanshaha?
Dhammaadka adeegyada nadiifinta deggeneyaasha waxaa la heli karaa 08:00 ama 1:30 pm Isniinta ilaa Sabtida iyadoo ku xiran helitaanka.
Ma dhammayn kartaa dhammaadka adeegga nadiifinta degganaanta haddii aanan joogin?
In alla intaad diyaarin karto gelitaanka gurigaaga, waxaan sameyn karnaa nadiifinta. Waxaan sidoo kale aruurin karnaa oo soo celin karnaa furayaasha kharash yar.
Ma bixisaa dhammaan qalabka nadiifinta iyo qalabka looga baahan yahay adeegga?
Waxaan bixinaa dhammaan agabyada nadiifinta iyo qalabka looga baahan yahay dhammaadka kireysiga oo nadiif ah.
Ma dhaqdaa derbiyada rinjiga iyo saqafka oo qayb ka ah dhammaadka nadiifinta kireysiga?
Maya, kuma dhaqno darbiyada rinjiga leh iyo saqafka saqafka ah, waxaan kaliya wasakh nahay oo waxaan ka saarnaa cobwebs-ka.
Ma inaan qaboojiyaa qaboojiyaha ka hor bixitaanka nadiifka ah?
Fadlan hubso in baraf-hayaha la qalajiyay maalin ka hor, sidii haddii aysan ahayn, waxay ku kici doontaa £ 30 dheeraad ah si dhakhso ah marka lagu nadiifiyo maalinta adeegga nadiifinta.
Nadiifinta daaqada bannaanka ma lagu soo daray dhammaadka adeegyada nadiifinta kireysigaaga?
Waxaan ku nadiifin karnaa daaqadaha dibedda lacag dheeraad ah, haddii ay jirto meel aamin ah oo loo heli karo, tan kuma jiraan dhamaadka heerka caadiga ah ee adeegga nadiifinta kireysiga.
Immisa nadiifiye ayaa imaan doona maalinta?
Dhamaadka shaqaalaha nadiifinta kireystaha waxay ka kooban yihiin hal ilaa afar qof.
Gogosha roogaga iyo nadiifinta khamriga miyey qayb ka yihiin dhammaadka adeegga kireysiga?
Qaadashada kaliya rooga iyo alaabada jilicsan ayaa lagu soo daray dhamaadka heerka jadwalka nadiifinta kireysiga, roogagga xirfadleyda ah iyo nadiifinta khamriga ayaa sidoo kale laga heli karaa lacag dheeraad ah, ** Magaca Shirkaddaada ** waxaan ku faanaynaa nafsaddayada bixinta rooga tayo sare leh iyo nadiifinta dharka nadiifka ah. .
Macmiilku wuu burin karaa ama dib u dhigan karaa nadiifinta isagoo na siiya ugu yaraan 48 saacadood oo ogeysiis ah. Ka gaabinta inaad na siiso ogeysiiska loo baahan yahay waxay ku dambayn doontaa dacwad 50% wadarta lacagta la soo dallaco.
Macmiilku wuxuu dib u dhigan karaa ama baajin karaa ballanka taleefanka ama emayl.
** Magaca Shirkaddaaga ** wuxuu xaq u leeyahay inuu diido shaqo kasta oo nadaafadeed haddii xaaladda guryuhu khatar ku tahay caafimaadka iyo wanaagga hawlgaladeena.
** Magaca Shirkaddaada> wuxuu xaq u leeyahay inuu kansalo ama dib u dhigto nadaafad dhacdo shil ama xaalad kasta oo aan la fileyn ay ku dhacday kooxda nadaafadda ee loo xilsaaray.
** Magaca Shirkaddaada ** iyo nadaafadda shaqsiyadeed waxay leeyihiin Caymiska Mas'uuliyadda Dadweynaha.
Sheegashooyinka waxaa dabooli kara ** Magaca Shirkaddaada> iyo / ama ceymis hawleedkiisa, kaliya haddii waxyeelada / jabku lagu soo warbixiyo gudaha 24ka saac ee nadiifka ah.
** Magaca Shirkaddaada> wuxuu xaq u leeyahay inuu baaritaan gudaha ah ku sameeyo sheegashooyinka uu sameeyo macmiilku.
** Magacaaga Shirkadda ** waxay leedahay xuquuq kasta oo ay ku diiddo shaacinta dukumiintiyada shirkadda qarsoodiga ah.
Macmiilku waa inuu siiyaa koronto iyo biyo socda dhismayaasha meesha nadiifka laga yahay. Hadday ku guul daraystaan inay sidaas sameeyaan ** Magacaaga Shirkadda ** looma qaban karo mas'uuliyadda dhammaystirka ama daahitaanka shaqada.
Macmiilku wuxuu mas'uul ka yahay inuu siiyo gelitaanka guriga waqtigii loogu talagalay. Haddii furayaasha la bixiyo waa inay furaan oo xiraan dhammaan furayaasha looga baahan yahay marin u helka iyo inay nadiifiyaan. Hadaanan awoodi kari weyno inaan galno guriga, waxaan ilaalinaa xuquuqda aan joojino / dib u dhigno nadaafada.
** Magaca Shirkaddaada ** mas'uul kama ahan wixii qaylo-dhaan ah ee ka dhashay markii la nadiifinayay. Macmiilku waa inuu siiyaa ** Magaca Shirkaddaada> tilmaamo buuxa oo ku saabsan curyaaminta iyo / ama dib-u-dejinta qaab kasta oo qeylo-dhaan ah dhismaha.
** Magaca Shirkaddaada> wuxuu iskudayaa inuu yimaado waqtiga loogu talagalay nadiifinta. Si kastaba ha noqotee, gunno macquul ah waa in la sameeyaa, duruufaha ka baxsan xakameynteena, oo dib u dhigi kara imaatinkeenna